tsy hita: Martin Vrijland
Tag: tsy hita
Efa tsy hita intsony i Anja Schaap, PsyOp? Jereo ny antony (video)
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 June 2019	• 15 Comments
Efa trandrahina ve ny raharaha Anja Schaap ho PsyOp (fiasa ara-tsaina)? Ao amin'ny lahatsoratro teo aloha dia efa nanamarika aho fa ny raharaha Anja Schaap dia mety hitodika amin'ny fampidirana ny rindrambaiko antsoina hoe 'Sherlock'. Eny, inona no hitantsika raha jerentsika ny pejy Facebook an'i Anja Schaap? Avy eo dia hitantsika fa anisany izy [...]
Julie van Espen, Anne Faber, Belzika ary mpamono an'i Steve B. Belleman Michael P. ao amin'ny PsyOp farany?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 May 2019	• 7 Comments
Tantara iray hafa miavaka, ny tantaran'i Julie van Espen (23) sy ny mpamono azy Steve B.. Ny tantara dia mampahatsiahy avy hatrany ny Dutch Faber (25) sy ny mpamono azy Michael P., saingy avy eo dia somary haingana kokoa lany daty. Mbola miatrika fijery ara-tsaina (psyOp) indray avy eo [...]
Misy ireo Vikipika vebe Viegers avy any Enkhuizen? Ny fikarohana dia manolotra ny trangan'i PsyOp tsy hita
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 19 Febroary 2019	• 22 Comments
Rehefa hita ny fanjavonan'i Siebe Viegers avy any Enkhuizen omaly tao amin'ny vaovao dia tsy maintsy nieritreritra avy hatrany ny raharaha Anne Faber aho ary ny fanirian'ny governemanta hilalao ny lalao Problem, Reaction, Solution hampidirana lalàna vaovao. Teo aloha dia nanao fikarohana momba ny anaran'i Viegers aho, satria [...]
Anne Faber, vehivavy iray manan-tsaina amin'ny 25 amin'ny bisikileta, alohan'ny hatsiaka sy ny toetr'andro ratsy
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 Oktobra 2017	• 31 Comments
Ny vehivavy manan-tsaina amin'ny 25 dia manapa-kevitra ny haka ampahany matanjaka amin'ny fampiofanana azy, raha toa ka efa mialoha ny hariva ny toetr'andro ratsy? Moa ve tsy nananan'i Anne Faber fampiharana izay nahazo tatitra toy izany? Tsy namaky ny vaovao ve izy ireo? Nanao selfie hafa izy ho an'ny namany. Tsy namaly tamin'ny [...]
Inona no tokony hoeritreretintsika momba ny fahaverezan'i Anne Faber?
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Oktobra 2017	• 31 Comments
Na dia natao aza ny raharaha Romy sy Savannah toy ny hoe voavaha io, ny fanambarana mazava na ny porofo mivaingana dia tsy misy ary ny raharaha dia toa nangina fotsiny. Eny, miatrika ahiahy isika ary misy tantara ofisialy izay manome ny fahatsapana fa i 2 dia miatrika tranga marobe izay efa voavaha, saingy misy [...]
Ireo tanora tsy hita popoka Mikey Rademaker (15) avy any Heerlen sy Christel van den Berg (13) avy ao Veldhoven
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 Jolay 2017	• 11 Comments
Zatovo vitsivitsy no nanjavona indray. Ireo dia Mikey Rademaker (15) avy any Heerlen sy Christel van den Berg (13) avy any Veldhoven. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nisy tantara momba ny tovovavy iray hita tao anaty lavaka na tovovavy hafa novonoin'ny mpanamory fiarandalamby. Na izany aza dia mampahatsiahy avy hatrany an'i Romy sy Savannah. Raha [...]
Total fitsidihana: 4.240.946
Very ady sahady? Sa tena hifoha sy handray andraikitra isika?
Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
Coronavirus, famafazana valala ary faminaniana faminaniana hafa
Ny ady an-trano amerikana efa voambara mialoha dia akaiky ary akaiky: milisy BLM manao diabe tany Georgia
Coronavirus covid-19: izay tsy maheno an'i Maurice de Hond sy Willem Engel
mari-toerana op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
Jos De Jong op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
kc2211 op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2